Iindaba-Inkampani yeJiafeng: Iimveliso zeRPET ziya kuba sisiqhelo sophuhliso oluzinzileyo lwezixhobo kwixesha elizayo.
Ngoku kuyakhawuleziswa ukukhusela okusingqongileyo.Amashishini ngakumbi nangakumbi ayakuqonda ukubaluleka kokujikeleza ngobuhlobo kwaye ajoyine iRPET kwaye enze igalelo kukhuselo lokusingqongileyo emhlabeni. ezenziwe ngeebhotile zeplastiki eziRisayikilishwe ezenziwe ngomsonto amalaphu alukiweyo ohlobo olutsha lokhuselo lokusingqongileyo oluhlaza, umthombo wayo ophantsi wekhabhoni, wenza umbono omtsha kwicandelo lokuvuselelwa.
Ngombono wophuhliso oluzinzileyo, ngoku izinto ezingakumbi zokusingqongileyo zisetyenzisiwe kuluhlu olubanzi apha: ikotoni yendalo okanye yendalo kunye nelineni ziqhelekile kuyo yonke indawo, izinto zeRPET zisendleleni, ngelixa i-EVA okanye i-TPU erisayikilishwe iya kuba umkhwa omtsha. Izinto ezintsha zefayibha zezityalo ezifana nelinanapple nelaphu lebhanana ziyaphuhliswa kwaye ziyasetyenziswa.
UJiafeng unconywa ukuba aqhubeke nomoya "wokunyaniseka, ukuthembeka, intsebenziswano kunye nezibonelelo ezifanayo", ngelixa engonakalisi okusingqongileyo.
Color umbala weTyvek la
Jiafeng usoloko unyanzelisa ukuba ukusetyenziswa kweemveliso zokusingqongileyo ziindlela eziluncedo zelizwe.Le ngxowa ye-RPET ayaneli nje ukuhlangabezana neemfuno zokusingqongileyo kunye nomgangatho ophezulu, kodwa ilungele abantu ngokubanzi, iyasebenza kunye nefashoni.
I-Jiafeng ikwanazo nezinye iintlobo zeebhegi ezinezixhobo ezahlukeneyo ze-eco-friendly.Ngokufana nefayibha yesityalo, umqhaphu onokuphinda usebenze, iphepha lephepha, iphepha laseTyvek, iphepha lekraft, i-TPU enokubola kwaye njl Zonke izinto zinokuguqula ibhegi yomlingo neyodwa.
1, ingxowa yelinen yelinen
2, ibhegi yomqhaphu esebenzisekayo
3, Iphepha lengxowa yomququ
4, ibhegi yephepha leTyvek
5, okwakhiwa ibhegi iphepha
7, Ezinye iingxowa RPET
Xa kuthelekiswa nekotoni ye-polyester yomthonyama, i-RPET ayigqali nje kuphela kwisitayile sezityalo ze-PET kodwa ziluncedo kumalaphu ekotoni.